ကမ္ဘာကျော်ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်တွေရဲ့ နောက်ကွယ်က စိတ်ဝင်စားစရာ ပုံပြင်တွေ – For her myanmar
Posted on May 6, 2019 Author Stella	Comment(0)
ယောင်းတို့ရေ … ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ထက်ဝက်ကျော်လောက်က Chanel, LV, Gucci, Versace စတဲ့ Luxury brands တွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံနေရပါတယ်။ ဒီဘရန်းဒ်တွေက ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ခံယူတဲ့လူတွေရှိတာကြောင့်လည်း ဒီဘရန်းဒ်တွေရဲ့ အောင်မြင်မှုက ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲ။ တစ်ခါမြင်လိုက်တာနဲ့ ဒီအမှတ်အသားတံဆိပ်က ဒေါ်လာထောင်ချီတဲ့ luxury brand ပါလားလို့ အမှတ်ရနေစေတဲ့ Logo တွေ ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲကော မသိချင်ဘူးလား ?
Chanel logo ကတော့ Chanel ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ Coco Chanel ရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ “C” နှစ်လုံးကို ကျောချင်းကပ်ထားတဲ့ ပုံစံနဲ့ logo ကို ဘယ်လိုအတွေးနဲ့ရေးဆွဲခဲ့လဲဆိုတာကတော့ ဘယ်သူမှ ရေရေရာရာမသိကြပါဘူး။ တစ်ချို့က Coco Chanel ငယ်စဉ်က နေခဲ့ရတဲ့ မိဘမဲ့ဂေဟာရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်လို့ ပြောကြတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ သူ(မ)နဲ့ သူ(မ)ရဲ့ချစ်သူ Arthur Boy Capel တို့ရဲ့ နာမည်စာလုံးတွေကို ယူပြီးရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့ပြောကြတယ်။ ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်း ပါးစပ်ရာဇဝင်တွေပါပဲ။
၁၉၇၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ Versace ကို စတင်တည်ထောင်တော့ တည်ထောင်သူ Gianni Versace ခမျာ logo စဉ်းစားရင်း အတော်အကြပ်ရိုက်သွားသေးတယ်ဆိုပဲ … နောက်ဆုံးမှာတော့ ဂရိပုံပြင်တွေထဲက ကြည့်မိသူတိုင်း ကျောက်ရုပ်ဖြစ်သွားစေတဲ့ Medusa ရဲ့ ခေါင်းပုံစံကို ယူပြီးပဲ အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဘာကြောင့် ဒီရုပ်ပုံကို သုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲလို့ မေးကြည့်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ Medusa ကို ချစ်မိသူတိုင်း ရုန်းထွက်မရနိုင်သလို Versace ကို ရွေးချယ်ခဲ့သူတိုင်းလည်း နောက်ပြန်မလှည့်ချင်အောင်လို့ပါတဲ့။
အခုတလော Stella တို့ နိုင်ငံမှာပါ ခေတ်ထနေတဲ့ Gucci ကတော့ သူ့ရဲ့စတင်တည်ထောင်သူ Guccio Gucci ရဲ့ နာမည်အစ စာလုံးတွေပါ။ ၁၉၂၁ ခုနှစ်လောက်မှာ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ logo ပေမဲ့ လူသိများလာတာကတော့ ၁၉၆၀ နဲ့ ၇၀ ပြည့်နှစ်တွေ ရောက်မှပါ။ အခုနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ “G” နှစ်လုံးညာဘက်လှည့်နေတဲ့ပုံစံ၊ အတွင်းဘက်လှည့်နေတဲ့ပုံစံ၊နဲ့ ပန်းကနုတ်ဆန်ဆန်ပုံစံတွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
LV ဆိုတာနဲ့ လူတိုင်းလိုလိုရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Louis Vuttion ရဲ့ logo ကတော့ ၁၈၉၆ ခုနှစ်မှာ Georges Vuitton ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ဖက်ရှင်လောကရဲ့ မြင်သာထင်သာအရှိဆုံး အမှတ်တံဆိပ်လို့တောင်မှ ဆိုစမှတ်ပြုခံရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေကတော့ ဂျပန်ပြည်က ပန်းပွင့်ပုံစံလေးကို အမှီပြုထားတာပါတဲ့..
ကဲ … ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းတို့လည်း ကမ္ဘာကျော်ဇိမ်ခံဘရန်းဒ်တွေရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေ နောက်ကွယ်က ပုံပြင်လေးတွေကို သိကြလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ယောင်းတို့ကို စိတ်ဝင်စားစရာတွေ အကြောင်းအရာတွေ ဝေမျှပေးဖို့ရှိသေးတာကြောင့် For Her Myanmar ကို စောင့်ဖတ်ပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
ဘရနျးဒျတှကေို ကွိုကျတတျပမေဲ့ ဒါတှမေသိထားရငျ မဟုတျသေးဘူးနျော..
ယောငျးတို့ရေ … ကမ်ဘာ့လူဦးရရေဲ့ ထကျဝကျကြျောလောကျက Chanel, LV, Gucci, Versace စတဲ့ Luxury brands တှရေဲ့ လှမျးမိုးမှုကို ခံနရေပါတယျ။ ဒီဘရနျးဒျတှကေ ကိုယျ့ရဲ့အောငျမွငျမှုနဲ့ ခမျြးသာကွှယျဝမှုကို ကိုယျစားပွုတယျလို့ ခံယူတဲ့လူတှရှေိတာကွောငျ့လညျး ဒီဘရနျးဒျတှရေဲ့ အောငျမွငျမှုက ကွောကျခမနျးလိလိပါပဲ။ တဈခါမွငျလိုကျတာနဲ့ ဒီအမှတျအသားတံဆိပျက ဒျေါလာထောငျခြီတဲ့ luxury brand ပါလားလို့ အမှတျရနစေတေဲ့ Logo တှေ ဘယျလိုဖွဈပျေါလာလဲကော မသိခငျြဘူးလား ?
Chanel logo ကတော့ Chanel ကို စတငျတညျထောငျခဲ့သူ Coco Chanel ရေးဆှဲခဲ့တာဖွဈပွီး ဒီနဒေီ့အခြိနျထိ ပွောငျးလဲခဲ့ခွငျးမရှိသေးပါဘူး။ “C” နှဈလုံးကို ကြောခငျြးကပျထားတဲ့ ပုံစံနဲ့ logo ကို ဘယျလိုအတှေးနဲ့ရေးဆှဲခဲ့လဲဆိုတာကတော့ ဘယျသူမှ ရရေရောရာမသိကွပါဘူး။ တဈခြို့က Coco Chanel ငယျစဉျက နခေဲ့ရတဲ့ မိဘမဲ့ဂဟောရဲ့ အမှတျတံဆိပျလို့ ပွောကွတယျ။ တဈခြို့ကတော့ သူ(မ)နဲ့ သူ(မ)ရဲ့ခဈြသူ Arthur Boy Capel တို့ရဲ့ နာမညျစာလုံးတှကေို ယူပွီးရေးဆှဲခဲ့တယျလို့ပွောကွတယျ။ ဒါတှအေကုနျလုံးကလညျး ပါးစပျရာဇဝငျတှပေါပဲ။
၁၉၇၀ ခုနှဈဝနျးကငျြလောကျမှာ Versace ကို စတငျတညျထောငျတော့ တညျထောငျသူ Gianni Versace ခမြာ logo စဉျးစားရငျး အတျောအကွပျရိုကျသှားသေးတယျဆိုပဲ … နောကျဆုံးမှာတော့ ဂရိပုံပွငျတှထေဲက ကွညျ့မိသူတိုငျး ကြောကျရုပျဖွဈသှားစတေဲ့ Medusa ရဲ့ ခေါငျးပုံစံကို ယူပွီးပဲ အမှတျတံဆိပျအဖွဈ သုံးစှဲခဲ့ပါတယျတဲ့။ ဘာကွောငျ့ ဒီရုပျပုံကို သုံးဖို့ဆုံးဖွတျခဲ့တာလဲလို့ မေးကွညျ့ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ Medusa ကို ခဈြမိသူတိုငျး ရုနျးထှကျမရနိုငျသလို Versace ကို ရှေးခယျြခဲ့သူတိုငျးလညျး နောကျပွနျမလှညျ့ခငျြအောငျလို့ပါတဲ့။
အခုတလော Stella တို့ နိုငျငံမှာပါ ခတျေထနတေဲ့ Gucci ကတော့ သူ့ရဲ့စတငျတညျထောငျသူ Guccio Gucci ရဲ့ နာမညျအစ စာလုံးတှပေါ။ ၁၉၂၁ ခုနှဈလောကျမှာ ရေးဆှဲခဲ့တဲ့ logo ပမေဲ့ လူသိမြားလာတာကတော့ ၁၉၆၀ နဲ့ ၇၀ ပွညျ့နှဈတှေ ရောကျမှပါ။ အခုနောကျပိုငျးတှမှောတော့ “G” နှဈလုံးညာဘကျလှညျ့နတေဲ့ပုံစံ၊ အတှငျးဘကျလှညျ့နတေဲ့ပုံစံ၊နဲ့ ပနျးကနုတျဆနျဆနျပုံစံတှကေိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။
LV ဆိုတာနဲ့ လူတိုငျးလိုလိုရငျးနှီးပွီးသားဖွဈတဲ့ Louis Vuttion ရဲ့ logo ကတော့ ၁၈၉၆ ခုနှဈမှာ Georges Vuitton ဖနျတီးခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ ဒီနဒေီ့အခြိနျထိ ဖကျရှငျလောကရဲ့ မွငျသာထငျသာအရှိဆုံး အမှတျတံဆိပျလို့တောငျမှ ဆိုစမှတျပွုခံရပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ပနျးပှငျ့လေးတှကေတော့ ဂပြနျပွညျက ပနျးပှငျ့ပုံစံလေးကို အမှီပွုထားတာပါတဲ့..
ကဲ … ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးတို့လညျး ကမ်ဘာကြျောဇိမျခံဘရနျးဒျတှရေဲ့ အမှတျတံဆိပျတှေ နောကျကှယျက ပုံပွငျလေးတှကေို သိကွလောကျပွီထငျပါတယျ။ နောကျထပျလညျး ယောငျးတို့ကို စိတျဝငျစားစရာတှေ အကွောငျးအရာတှေ ဝမြှေပေးဖို့ရှိသေးတာကွောငျ့ For Her Myanmar ကို စောငျ့ဖတျပေးဖို့ မမနေဲ့နျော။
Tagged brands, Fashion, Knowledge, logo, luxury
မုဒိန်းမှုကျူးလွန်သူ အပြစ်သား အယောက်တစ်ရာကို အင်တာဗျူးခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယကျောင်းသူလေး
Posted on October 26, 2017 October 26, 2017 Author Myat Moe
သူ(မ)ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ မုဒိန်းမှုရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေက…
လူတော်တော်များများ သတိမမူမိဘဲ လုပ်မိနေတဲ့ အမူအကျင့် အမှားများ
Posted on February 22, 2019 February 22, 2019 Author Stella
ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေကြောင့် သူများတွေ စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ရလေအောင်